खुशीको खवर : चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले बनायो कोरोना विरुद्धको खोप, अव कसैले मर्न पर्दैन ! «
खुशीको खवर : चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले बनायो कोरोना विरुद्धको खोप, अव कसैले मर्न पर्दैन !
Published : 15 April, 2020 8:01 pm
चिनियाँ जनमुक्ति सेना कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप बनाउन सफल भएको छ । जनमुक्ति सेनाले तयार गरेको खोप मानिसमा परीक्षणको अनुमती पाएसँगै सफल पाएसँगै चीन सरकारले अनुमति पनि दिएको छ । औषधि नपाएर पूरै विश्व आक्रान्त भइरहेको छ । दिनदिनै मानिसहरु ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । सुरु भएको कोरोनाभाइरस युरोप हुँदै अहिले अमेरिकालाई केन्द्र बनाएर संसरभर फैलिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि देशले पनि औषधि तयार पार्न नसक्दा मानिसहरु निरास हुँदै गइरहेका थिए ।